Xogo kaa Qarsoon oo ku saabsan Mukhtaar Roobow iyo waayihiisa Shabaabnimo. – Xeernews24
Xogo kaa Qarsoon oo ku saabsan Mukhtaar Roobow iyo waayihiisa Shabaabnimo.
Sheekh Mukhtaar Abuu Mansuur oo dadka u yaqaanaan Roobow ayey Mareykanka ka saareen liis ay dul dhigeen lacago malaayiin ah.
Liiska waxaa ka mid ahaa 6 kale oo ka tirsan madaxda Shabaab, waxaa xusid mudan in Roobow aan marnaba ka mid noqon liiska argigixisada uu Mareykanka soo saaray.
Bishii June 2017 ayaa Dowladda Maraykanku ka saartey liiska madaxooda lacagta lagu raadinaayo, taas waxay soo dedejisey in Shabaab ay culeys saaraan Abu Mansuur si ay u qabtaan.
Maxaan ku baranay Sheekh Mukhtaar Roobow inta uu ku jiray Shabaab
Sheekh Mukhtaar Roobow ayaa mudadii uu ka tirsanaa maleeshiyaadka hadaf ahaan ka duwanaa, waxaana lagu xasuustaa mudada uu la shaqeynaayay inuu ka hor imaan jiray ficil waliba oo lid ku ah diinta iyo dadnimada oo ay ku kacaan Shabaabka.
Waxa uu talaabo weliba ku eegi jiray marxalada markaa jirta waxaana lagu amaanaa inuu badbaadiyay mas’uuliyiin iyo shaqaale ka tirsanaa dowlada kuwaa oo sif khaldan lagu xukumi lahaa.
Roobow waa Horjoogihii keliya oo warbaahinta ka dhaleeceeyay maleeshiyaadka Shabaabm isagoo saxaafada la wadaagay dhammaan khaladaadka Shabaab.
Waa Kuma Sheekh Mukhtaar Roobow
Sheekh Mukhtaar illaa hadda waxaa uu ku magacaaban yahay guddoomiye ku­xigeenka Shabaab, waxaa uu ku jiraa aasaasayaashii Xarakada, isaga oo ka soo jeedaa beesha Leesaan oo ka tirsan Digil iyo Mirifle ee degta gobollada Bay iyo Bakool.
Inta aan loo magacaabin Guddoomiye ku­xigeenka Al­shabaab, waxaa uu muddo ahaa afhayeenka Al­shabaab, dalka Mareykanka ayaa sida aan soo sheegnay bishii June 6, 2012­kii ku daray liis la dul dhigay lacag.
Mareykanka waxaa ay sheegeen in $7 Milyan dul dhigeen aasaasaha Al­shabaab Axmed Cabdi Godane, $5 Milyan ragga kala ah Ibrahim Xaaji Jaamac, Fu’aad Maxamed Khalaf, Bashiir Maxamed Maxamud iyo Mukhtaar Roobow halka $3 Milyan la dul dhigay Zakariye Ismaaciil Xersi iyo Cabdullahi Yare.
Tillaabada Mareykanka kadib, Abuu Mansuur Roobow oo ka hadlayey masjid uu salaadda jimcaha ku tukaday oo ku yaalo Buur­hakaba waxaa uu sheegay in aanu iska qarin doonin Mareyaknaka, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa “Aw Mareykanka aniga waxaa jooga Buurhakaba, Masaajidka ayaa salaadii jimcaha ku dukaday, jimcihii hore waxaa ku dukaday Tiyeeglow”.
Mukhtaar Robow waxaa ay isku dhaceen madaxii Al­shabaab Axmed Godane taasi oo keentay in lagu weeraro guri uu ka deganaa degmada Baraawe kadibna uu u baxsaday gobollada Bay iyo Bakool.
3dii sano ee ugu dambeysay waxaa hayey maleeshiyaad beeshiisa ah, waxaana sidoo kale muuqata in uu wada hadal la galay maamulka Koonfur Galbeed iyo dalka Mareykanka, tilaabadan looga laabtay lacagta la dul dhigay waxaa ay soo dedejisay inuu isku dhiibay dowladda federaalka.
IS BEDELKA ROOBOW:­ Sheekh Mukhtaar Abuu Mansuur wixii ka dambeeyay 2013­kii waxaa uu ka mid ahaa Al­shabaabta aan raacsaneen Axmed Godane.
Kooxdan waxaa ku jiray Ibraahim Afgaan, Abuu Mansuur Al­Amriikii, Sheekh Xasan Dahir Aweys iyo qaar kale, waxaa ay Al­shabaab uga goosteen Shabeellada hoose, qaarkood magaalada Marka ayey doon ka raaceen, qaarna Baraawe iyo Mukhtaar Roobow oo aadey dhulkii uu ka soo jeeday.
August 13 2017 oo maanta ku beegan waxa uu Mukhtaar Roobow qaatay Nabadda waxa uuna isku soo dhiibay dowlada Federaalka.
Docda kale, Khilaafkooda waxaa uu ka dhashay markii uu Axmed Godane laayay Saraakiil sar sare oo Shabaabka ka tirsaneyd, ka dib markii ay saluug ka muujiyeen xukunkiisii adkaa.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/08/IMG_20170623_213413-280x175.jpg 175 280 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-08-14 09:15:162017-08-14 09:15:16Xogo kaa Qarsoon oo ku saabsan Mukhtaar Roobow iyo waayihiisa Shabaabnimo.
Jawaab Culus oo Dhulka Jiiday Mohamed Muuse Bucul(Buuni) DAAWO: Falanqeyn & Xog: Sh Roobow oo loo geyn doono Xasan D. Aweys &...